Sida loogu xiro Twitch Prime iyo GTA habka ugu fudud | Madasha Mobile -ka
Sida si fudud loogu xiro Twitch Prime ilaa GTA
Cristian Garcia | 25/09/2021 09:58 | Ciyaaraha
Ma la yaabban tahay sida loogu xiro koontadaada Rockstar Twitch Prime GTA si aad u hesho abaalmarino? Waa hagaag, waxaan filaynaa inay ka fudud tahay. Waxaad heli doontaa isla marka aad dhammayso akhrinta maqaalkan. Oo waa marka aad hesho, waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho abaalmarino badan Grand Theft Auto Online ama ciyaar kasta oo Rockstar ah sida Red Dead Online. Kaliya adoo isku xira koontada waxaad ka buuxsami doontaa hadiyado yaryar.
Sida lacag loogu siiyo GTA V Online ciyaartoy kale
In kasta oo Grand Theft Auto Online ay toban sano ka dambayso, ciyaarta fiidiyaha ayaa sii socota si buuxda oo da 'yar ayaa ugu mahadcelineysa qaabkeeda tooska ah ee GTA Online kaas oo helaya cusbooneysiin waqti ka waqti. Soosaarayaasha Rockstar ma joojin inay rabaan inay ciyaarta fiidiyowga sii noolaadaan waxayna awoodeen inay la maraan laba jiil oo dhan consoles -ka ah, waxayna sii wadaa inay iibiso. Markaa haddii aad tahay Ciyaaryahan Grand Theft Auto Online oo aad sidoo kale leedahay Twitch Prime, waxaad luminaysaa abaalmarino badan. Si aad ula qabsato fikradda xagaagan la soo dhaafay malaayiin iyo malaayiin ayaa ciyaarta wax looga qabtay si aad wax kasta oo aad rabto ugu kharash garayso dhibaato la'aan. Dhammaan kharashka Rockstar iyo horumariyayaashiisa.
Taasi waa sababta aan u diyaarinnay tilmaamahan sababtoo ah run ahaantii waan rumaysanahay taas waxaa mudan in la ogaado sida loo isticmaalo Twitch Prime si fiican. Mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah abaal -marinnada ay Amazon ka bixiso Twitch oo lagu dhajiyo bogga qulqulka moodada ee Twitch ayaa adiga kuu ahaan doona. Haddii aad leedahay ciyaarta iyo haddii kaleba. Laakiin kiiskan waxaan rabnaa inaan xoogga saarno Xatooyada Grand Auto Online iyo sida loogu xiro Twitch Prime GTA dhammaan abaal -marinnadaas kaa maqan. Marka, aan sii wadno hagaha isku xirka xisaabaadka Rockstar iyo Twitch.
1 Sida loo xiriiriyo koontada Rockstar iyo Twitch Prime GTA
1.1 Sida loogu Xiro Twitch Prime GTA iyo Naadiyada Bulshada ee Rockstar
1.2 Ku xir aaladahaaga koontada Twitch iyo Club Club
Sida loo xiriiriyo koontada Rockstar iyo Twitch Prime GTA
Sidii aan nidhi, waxaas oo dhan waxay kugu qaadan doonaan dhowr daqiiqo waxaana lagu sameeyaa koonto ku taal Rockstar iyo Grand Theft Auto Online iyo sidoo kale koonto ku taal Twitch. Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sida waxaas oo dhami u shaqeeyaan dhibicduna waxay tahay in Twitch uu leeyahay adeeg lacag la yiraahdo Prime. Maanta waxaa loogu yeeraa Prime Gaming in kasta oo aan dhammaanteen u naqaanno “Prime”. Waxaa laga yaabaa inay sidan kuugu ekaato.
Si aad u hesho waxaad u baahan tahay inaad leedahay koonto ay tahay inaad hesho ka bixinaya koontadaada Amazon adeegga Prime oo, marka lagu daro faa'iidooyinka ciyaarta, ay leedahay kuwa kale marka ay amarada dul dhigayaan Amazon. Markaa, waxaad abaalmarintan oo dhan ku heli doontaa madal Twitch oo kaliya waxaad u baahan doontaa inaad isku xirto xisaabaadka ciyaar kasta. Laakiin waxaan u sharxi doonnaa tallaabo tallaabo tallaabo hadda ka dib.
Sida loogu Xiro Twitch Prime GTA iyo Naadiyada Bulshada ee Rockstar
Sidii aan hore u sheegnay wax kasta oo kale, waa inaad koonto ku leedahay Twitch Prime iyo sidoo kale Naadiga Bulshada ee Ciyaaraha Rockstar. Haddii aadan ogeyn masraxa Rockstar, asal ahaan waxay ka timaadaa halka dhammaan ciyaaraha internetka ee shirkadda Mareykanka ay ka shaqeeyaan. Gabi ahaanba waa bilaash halkaasna waad kula socon kartaa wararkeeda oo waxaad ku ciyaari kartaa GTA khadka tooska ah. Marka hore waa inaad iska diiwaangelisaa naadiga bulshada taasna waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Waa inaad tagtaa websaydhka rasmiga ah ee Naadiga Bulshada ee Rockstar oo markaad halkaas joogto waa inaad gasho ama isdiiwaangelisaa iyadoo ku xidhan inaad hore isu diiwaangelisay iyo in kale. Talada ugu horreysa ee aan ku siinno waa inaad isticmaasho isla cinwaanka iimaylka ee aad u qori jirtay Twitch Prime ee Social Club. Haddii aad hore u gashay, magacaaga adeegsadaha ayaa soo bixi doona, haddii aadan sidaas yeelin, marnaba ma buuxin doontid waxa la codsaday. Markaad dhammaystirto diiwaangelinta waa inaad sii wadaa isku xirka koontadaada Twitch.
10-ka kulan ee ugufiican ee lagula ciyaaro asxaabta kombiyuutarka
Waxaa yimid halkaan markaan nidhaahno waa inaad ku xirtaa wax walba koontadaada Twitch. Markaad ka hesho xulashadaas Naadiga Bulshada oo guji, waad arki doontaa taas wuxuu si otomaatig ah kuu geyn doonaa bogga Twitch halkaas oo wax walba ay ku salaysnaan doonaan bixinta oggolaanshaha ilaa Twitch. Daaqaddaas, waxaa lagu tusi doonaa oo keliya digniino iyo noocyada kale ee waxyaabaha caadiga ah ee ay tahay inaad aqbasho si aad ugu xirto koontada Twitch koontada Naadiga Bulshada. Qaar ka mid ah waxyaabaha lagaa digayo ayaa ah inay awoodi doonaan inay arkaan cinwaanka emaylkaaga, sida muuqata. Just oggolaansho saxaafadeed waana intaas.
Ku xir aaladahaaga koontada Twitch iyo Club Club
Ficil ahaan ma jiraan wax hadhay si aad u bilowdo sheegashada dhammaan abaalmarintaada Twitch iyo ku haay Grand Theft Auto Online si aad ugu raaxaysato. Dhab ahaantii, waxaad ka dalban kartaa madal kasta. Waana meesha aan hadda u soconno maadaama ay tahay inaad sidoo kale isku xirto aaladahaaga.
Markaad dhammayso hawsha xiriiri Twitch Prime GTA, xisaabaadka naadiga bulshada iyo Wax kasta oo aan hore kuugu sheegnay, waa inaad sii wadaa inaad samayso waxyaabo kale oo kala duwan. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay Steam, ama waxaad ka imaan kartaa XBOX iyo Playstation. Waa meesha aad ku xisaabtami doonto madal kasta ama konsole kasta. Si taas loo sameeyo, tusaale ahaan haddii aad ka timid Playstation, waa inaad tagtaa Playstation -kaaga oo ku xiraa Twitch oo leh akoonnada furan. Waxaas oo dhan waa inaad ku celcelisaa XBOX iyo Steam haddii aad la ciyaarto.
Ha u maleynin inay tani tahay wax u gaar ah Xatooyada Grand Online, Rockstar iyo Naadiyada Bulshada ee Rockstar maadaama haddii aad tahay isticmaale Twitch Prime, waa inaad ku xirtaa mid kasta oo ka mid ah xisaabaadka ciyaarta fiidiyahaaga madal. Sida saxda ah ee aad hore u samaysay. Sidaas ayaad ku bilaabi doontaa in lagu siiyo dhammaan maqaallada mid kasta oo ka mid ah cajaladaha fiidiyowga ee soo baxaya.
Sida loo iibiyo gawaarida GTA V (xitaa qadka)
Waxaan rajaynayaa in maqaalkani ku anfacay adiga iyo inaad horeba khadka internetka ugu xidhatay Twitch Prime iyo GTA V taasna hadda ka dib, waxaad noqon doontaa khabiir ugaarsiga deeqda ah ee Twitch. Ka digtoonow maadama waxyaalo cusubi u muuqdaan inay hoos u dhacaan bil kasta. Iyo wax walba oo ka sarreeya, sida aan nidhaahno, ha ku mashquulin kaliya Xatooyada Grand Auto Online maadaama ay jiraan abaalmarinno laga helo ciyaaraha fiidiyowga sida Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege iyo kuwo kale oo badan. Oh iyo dhammaanba xusuusnow inaad hadda ka tagi karto "Ra'iisul Wasaaraha" socodka aad ugu jeceshahay. Sidan ayaad isaga uga dhigi kartaa inuu arko inaad tahay raacdadiisii ​​muddada dheer!
Shaki kasta ama soo jeedin kasta waxaad kaga tagi kartaa sanduuqa faallada ee aad hoosta ka heli doonto. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobaylka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida si fudud loogu xiro Twitch Prime ilaa GTA
Waa maxay Plex iyo sidee buu uga shaqeeyaa TV -yada Smart
Si toos ah u gal Twitch
Hel qodobbada ugu dambeeyay ee tikniyoolajiyadda